Tirada dhimashada Gaza oo sii kordheysa iyo Israel oo dishay taliyayaal sare oo Xamaas ah | Radio Balcad
Home WARARKA MAANTA Tirada dhimashada Gaza oo sii kordheysa iyo Israel oo dishay taliyayaal sare...
Tirada dhimashada Gaza oo sii kordheysa iyo Israel oo dishay taliyayaal sare oo Xamaas ah
Tirada dhimashada ee Gaza ayaa sare u kacday markii ugu xumeyd ee sii kordheysa khilaafka Israa’iil iyo Falastiin sanado kadib markii Israa’iil ay dishay tiro xilal sare ka haysay militariga Xamaas isla markaana ay burburisay seddex munaaradood oo dhismayaal badan leh maadama ay duqeyn ka geysatay marinka Qaza weerarada dhanka cirka ah.
Wicitaanada qiiqa cawlan ayaa ka kacay Qaza Arbacadii, iyada oo weerarada cirka ee Israel ay ku dhaceen munaaradaha guryaha isla markaana ay qarxiyeen xarumo badan oo amniga Hamas ah Israel dhexdeeda, boqolaal gantaal oo ay ridayaan taliyayaasha Xamaas ee Gaza iyo kooxo kale ayaa mararka qaar qarqiyay difaacyada gantaalaha waxayna u direen seeriga iyo duqeymaha ka soo yeeraya guud ahaan Tel Aviv, deegaanka ugu weyn ee Israa’iil, iyo magaalooyin kale.
Wasaaradda Caafimaadka ee Qaza ayaa sheegtay in tirada guud ee dhimashada tan iyo markii weerarki ugu dambeeyay ay bilaabatay ay taagneyd ugu yaraan 65, oo ay ku jiraan 16 carruur ah. Ugu yaraan 365 qof ayaa ku dhaawacantay.
Lix qof ayaa lagu diley dhinaca Israel gantaal, oo uu kujirey dhimashadii ugu horeysay ee askari Israel ah wareegan iskahorimaadka.
Dhimashada kale waxay noqotay dadka rayidka ah, oo ay ku jiraan seddex haween ah iyo laba caruur ah, oo mid ka mid ah ay tahay lix sano jir ku dhaawacmay gantaal lagu weeraray dhisme dabaq ah oo ku yaal magaalada Sderot. Tobanaan ka tirsan Israa’iil ayaa la dhaawacay.
Raiisel wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in taliyaha guutada ee magaalada Gaza uu ka mid ahaa 15 xubnood oo kale oo ka tirsan Xamaas oo la dilay Arbacadii.
“Tani waa bilow. Waxaan u garaaci doonnaa sida aysan waligood ugu riyoon suuragal, ”ayuu yidhi.
Telefishanka Al Jazeera ee Harry Fawcett, oo ka soo waramaya koonfurta Israa’iil, ayaa sheegay in sida ay ku warramayso warbaahinta Israa’iil, Israa’iil ay ka wada hadlayso ikhtiyaarka ah in la isticmaalo ciidamada dhulka oo ay weheliso duulaanka xagga cirka ah.
“Taasi waa wax Israel aysan sameynin tan iyo 2014. Waxay wadataa dhammaan noocyada halista ah marka loo eego nolosha askarta Israel… Marka taasi ma ahan go’aan si fudud loo qaadan doono, laakiin waxay umuuqataa in ikhtiyaarka uguyaraan uu yahay in la dhigo, ”ayuu yidhi.
Colaada ayaa bilaabatay ka dib markii Xamaas ay soo saartay amar kama dambeys ah Isniinta iyaga oo dalbanaya in Israel ay istaagto ciidamadeeda amniga ee ka socda dhismaha Masjidka Al-Aqsa ee ku yaal magaalada Qudus ee Old City ka dib rabshad xoog leh oo ka dhan ah Falastiiniyiinta.
Isniintii ayaa loo aqoonsaday maalintii saddexaad ee isku xigta ee booliska Israel ay weeraraan goobta saddexaad ee ugu qiimaha badan Islaamka, iyagoo ku dhaawacay boqolaal rasaas rasaas bir ah oo dahaadhan, bambooyin naxdin leh iyo sunta dadka ka ilmaysiisa ee Falastiiniyiinta cibaadaysanayay maalmihii ugu dambeeyay ee bisha barakaysan ee Ramadaan.
Previous articleGaza’s death toll soars as Israel kills senior Hamas commanders
Next articleBanaanbax ka dhacay Magaalada Gaalkacyo
Weeraro ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose & faah faahino laga helayo